Ndị na-eme nnukwu ego na ọnwa mbụ nke atụmatụ Phuket Sandbox
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -emegharị na Thailand » Ndị na-eme nnukwu ego na ọnwa mbụ nke atụmatụ Phuket Sandbox
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ọ dị ihe dị ka otu ọnwa kemgbe ngosipụta njem nlegharị anya Phuket Sandbox, na kemgbe ahụ, Thailand nabatara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọbịa mba 10,000.
Atụmatụ njem nlegharị anya Phuket Sandbox bidoro n'ọnwa gara aga na Julaị 1, 2021, naanị ụbọchị 26 gara aga.
Kemgbe ahụ, enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị njem nleta 10,000 bịara ileta ma na -eme atụmatụ ịlaghachi iji nwee ọbịbịa na mpaghara ndị ọzọ.
Yabụ kedu ebe ndị kacha mefuo ego si malite n'ọnwa mmalite mbụ ahụ?
Mgbe ebidochara atụmatụ njem nlegharị anya Phuket Sandbox na Julaị 1, 2021, ọtụtụ ndị njem mba ofesi si ụlọ lọta, na -ekwu na ha na -eme atụmatụ ileta alaeze ahụ ọzọ na ezinụlọ ha, wee malite ịga leta mpaghara ndị ọzọ dịka Bangkok na Chiang Mai.
Dabere na ọnụ na-ekwuru Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA), Dr. Thanakorn Wangboonkongchana, onye bụ odeakwụkwọ nke Ọfịs Prime Minister, ka igbe dị na Phuket Sandbox Mwepụta, ihe dị ka ndị njem nlegharị anya 10,000 bịara ileta ya. Mba ndị ọbịa ise kacha elu sitere na United States, United Kingdom, Israel, Germany, na France.